Kuongorora Kwemotokari UK | Yangu Mota Kunze
Hupfumi hwechiitiko hunoshandura mota dzinounzwa kunze kwenyika kutevedzera ...
Yangu Mota Inotakura vatungamiriri muUK mota kuyedza uye kunyoresa masevhisi eEuropean uye Asiri-European mota. Isu tinokwanisa kugadzirisa zvakakodzera mota yako kuti iite maererano nemitemo nemitemo yeUK.
Tine pane-saiti IVA / MOT yekuyedza zvivakwa uye tinogoneswa zvizere neDVSA kuita kuyedza mota. Kana mota yako yatove muUK asi isingaite nemitemo yeUK yekunyoresa izvozvi, tinofara kubatsira nekugadzirisa mota yako kuti iite zvinodiwa, pamwe nekuita bvunzo yako.
Chikwata chedu chine ruzivo uye huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa hunovimbisa kuti mota yako yaunotora yakachengeteka uye yakagadzirira nzira dzeUK.
Boka redu rekuyedza rine makumi emakore ezviitiko zvakabatanidzwa mune mbiri kugadzirira mota yavo yeIVA / MOT kuyedzwa uye iyo IVA / MOT bvunzo pachayo. Tichagara tichishanda kuchengetedza mota yako padhuze nemagadzirirwo emugadziri sezvinobvira.
Kana iwe uri kuunza mota kubva kuEurope, isu tinoshanda kuti tiwane Chitupa Chekuenderana (kana usati watove nacho chimwe). Gwaro iri rinobva ratsanangura kuti ndezvipi zvinoda kugadziriswa kuti zvienderane nemitemo yeUK yekunyoresa mumigwagwa Izvi zvinowanzo kuve nemwenje, kumhanya kwepasipasi uye neshure kwemwenje mheni. Tinogona kubata mapepa ese kuitira kuti mota yako UK mugwagwa unyoreswe kubva mukuwirirana maitiro, kuenda kuV55 kupinza kunyorera.
Kune mota dzinounzwa kubva kunze kweEurope, tichapedzisa zvese IVA kugadzirisa uye kuyedza sezvazvinodiwa.
Rangarira, hurumende yeUK iri kuramba ichipwanya pakuona kuti mota dzekunze idzo dzave muUK kwemwedzi inodarika mitanhatu uye dzisati dzanyoreswa dzinoenda kuburikidza nekugadziriswa kwakakodzera uye kuyedzwa. Tora chitauro kubva kwatiri pazasi kuti uve nechokwadi chekuti mota yako inoenderana nemitemo yekunyoresa mumugwagwa yeUK.